kyishaung November 2010 edited December 2010 in Job Vacancy Web Developer M/F (1) Post-HTML,CSS,Front Page-Networking Basic နားလည်ရမည်။လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူဥိးစားပေးမည်။စိတ်၀င်စားသူများ ကျွန်တော့်ကို PM ပို့ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။အလုပ်သေချာရမည်။ နက်ဖြန်မနက်နောက်ဆုံးထားဆက်သွယ်ပါ။Tours Company မှာလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များ
select November 2010 edited November 2010 Registered Users salary ကရောအကို kyishaung November 2010 edited November 2010 Registered Users အဲ့တာတော့ အင်တာဗျူးမှ ညှိကြည့်ပါ်ခင်ဗျ..စိတ်၀င်စားရင် PM ပို့ပါလားဗျ ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ် emo December 2010 edited December 2010 Registered Users လူဆိုး . ငါ အခု မှ ဖတ်မိလို့ အကြောင်းပြန်တာ . . . အဲလို လုပ်နဲ့ . ငါ လာလျှောက်လိုက်ရမလား . Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla